Dowlada Germalka oo Lacag Dheeri ah ugu dartay Dadka Ceyrta Qaata ee Caawinta loo balan qaaday
HomeWararka CaalamkaDowlada Germalka oo Lacag Dheeri ah ugu dartay Dadka Ceyrta Qaata ee Caawinta loo balan qaaday
April 30, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Dowlada Germalka ayaa ku dhawaaqday go’an cusub oo ku aadan lacagta caawinta ee la siinayo dadka ku nool dalka ee Qaata lacagta Ceyrta.
Dowlada ayaa horay u balan qaaday in qof walbo oo dalka ku nool la siinayo lacag gaareysoa 100 Euro oo caawin ah bisha 7aad.
Lacagtaasi ayaa is badal lagu sameeyay waxana dowlada ay ka dhigtay 200€ oo dadkaasi loogu tala galay inay caawin ka dhigtaa.
Tan iyo markii Dalka uu ku dhacay xaalada Corona dad badan ayaa dhaqaalahooda hoos u dhacay waxana dowlada ay qaaday dhoor tilaabo.
Tilaabooyinka ay dowlada qaaday ayaa kamid ah in la caawiyo dadka dhaqaalo ahaan aadka u hooseeya.
Deg Deg: Gacan ku Dhiiglihii Dilay Atooraha Bada oo lasoo Qabtay iyo Booliska oo Ka Adlay
Mosque hit by explosion in Kabul